Igbo, Romans, Lesson 044 -- We are Children of God through the Dwelling of the Holy Spirit in us (Romans 8:12-17) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 044 (We are Children of God through the Holy Spirit)
7. Anyị bụ ụmụ Chineke site na obibi nke Mmụọ Nsọ n'ime anyị (Ndi Rom 8:12-17)
NDI ROM 8:12-14
12 Ya mere, umu-nna-ayi, ayi ji ugwọ, ọ bughi anu-aru, ibi ndu dika anu-aru si di. 13 N’ihi na ọ buru na i di ndu dika anu-aru si di, i gha inwu; ma ọ buru na site na Mọ Nsọ ime ka aru ghara idi ike nke aru, i gha adi ndu. 14 N’ihi na ndị niile bụ ndị mmụọ nke Chineke na-edu, ndị a bụ ụmụ nke Chineke.
Mụọ Nsọ anaghị ejedebe mmụọ nke ịchọ ọdịmma onwe gị bi n'ime gị, ka ọ kwụsị imegide gị, mana ọ na-aluso ya ọgụ ruo mgbe ọ ga-emegharị ọzọ. Mụọ nke Chineke ga-ahapụrụ gị belụsọ ma ị nabatara ọnwụ gị n'obe nke Kraịst, ma nwụọ na nganga gị, iwe gị, ikwubiga okwu ókè, na mmehie gị niile. A gaghị eke onye kwere ekwe ego ma ọ bụ ihe ntụrụndụ ka o wee bụrụ onye nweere onwe ya ma meghee mmụọ nke Onyenwe ya. Onye Nsọ na arụ ọrụ n’ime gị, dịka onye dọkịta na - awa ahụ nke na - ewepụ ihe ụfụ ahụ n’ahụ mmadụ. O gbue ya, mebie nrụrụaka. N’ụdị dị otu a, mmụọ nke Chineke na - achupu gị site n’ọchịchịrị gaa n’ìhè, ghara ikwuru okwu ụgha, site n’ihe ntụrụndụ ruo n’ihu Chineke. Yoù na-enwe nduzi ya? You na-anụ olu ebere ya? O bu n’uche idughari ma sachaa gi kpam kpam, ma gbanwee gi n’onyinyo nke Kraist nwere obi ebere. Ọrụ ebube nke ịdị nsọ site na mmụọ nke Chineke na-egosi n’ime gị site n’ịhụnanya, ọ joyụ na udo, nke ebidoro na ịdị umeala n’obi, ịhapụ ịdị nwayọ, na ịdị nwayọ, ya na njiri mara niile nke Kraịst, dịka a ga - asị na ị na - eyiri Onye nzọpụta gị dị ọcha. Mgbe ụdị mmụọ a na-asọ n'ime mkpụrụ obi gị, ị ga-abụ nwa Chineke. You matara nnukwu ihe ùgwù ahụ, na n'agbanyeghị mmehie gị, ị bụrụla ezigbo nwa nke Onye Okike nke ụwa site n'ọbara na Mmụọ nke Kraịst? I nwara ikwu na ị bụ nwa nke Chukwu? N'ihi na ka ndi nke Mo nke Chineke na-edu, ndi a bu umu Chineke.
NDI ROM 8:15-17
15 N’ihi na anatabeghị mmụọ nke ịbụ ohu ọzọ ka egwu tigbuo, kama ọ bụ mmụọ nke nara anyị nke anyị ji eti mkpu, “Nna, Nna.” 16 Mụọ ahụ n’onwe ya na-agba mmụọ anyị àmà na anyị bụ ụmụ nke Chukwu
Mụọ Nsọ na-ewepu egwu, obi nkoropụ, enweghị nchekwube, nchekasị na nsogbu n’obi gị, ma nye gị obi ike, obi ụtọ na ntụkwasị obi na Chineke. Ọ na-emepe ọnụ gị ikwu okwu n'aha Nna. Site na nkwupụta nke a, ị na-edo aha Chineke nsọ, n’ihi na nke a bụ nnukwu ọrụ ebube nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ; na Chineke sitere na Kraist ekpughere Onwe ya dika Nna ayi nke bi n’elu igwe. Onye Okike dị anya, bụ onye iwe na-eweso anyị iwe, anaghị agwụ anyị ike ma ọ bụ bufere anyị iwe, kama ọ na-egosi anyị ịhụnanya ya, ma na-egosi anyị ịdị mma ya n'ụdị nna. Ihe oyiyi ọhụrụ a na-agbanwe omume anyị kpamkpam. Okwu a bu “Abba” bu okwu Aramaic tinye n’ime leta Grik wee degharia ya na bekee. Ọ pụtara "Nna." Nmekorita nke ma ndi Ju ma ndi Grik (ndi mba ozo) n’ime Kraist ka ekpughere n'okwu okwu ndia.
Okwu ahụ “Nna” kọwara ma kwado okwu a, Abba.
Kraist, n'ihi oke ihunanya ya, nyere aru ya n’ihi anyi, ma mee anyi ndi anyi nwere ikike, ka Chineke nke ebube n’ekele anyi. Cheedị aha gị jiri ọbara nke Ọkpara Chineke dere n'ihu akwụkwọ nke kaadi nnabata, ma na azụ kaadị a ka ị na-agụ: “Chineke kuchiri ya”, nke e ji ọkụ nke Mụọ Nsọ dee ya, bịanyere aka n’aka Nna, Ọkpara, na Mmụọ Nsọ. Nwee ga-echefu kaadị pụrụ iche dị otú ahụ, chefuo ya, ma ọ bụ tụfuo ya? Ka ị ga-anabata ya, jiri anya mmiri ọ joyụ susuo ya ọnụ, ma debe ya ruo mgbe ebighị ebi.
I gha ezila iwu ma bụrụ nwa nke Onye kachasị ihe nile elu site na nkuchi, site na mụọ gị na Mmụọ Nsọ. Pọl onyeozi gwara gị ugboro ugboro n’ozi ọma ya, nke bara ụba ma jupụta n’amara, na ị ga-eketa Chineke n’onwe ya, n’ihi na Onye Nsọ bịakwutere gị n’ime Jizọs. O bi n’ime unu na ndi nso niile, ebube ya ga - aputa n’ime anyi niile, dika Kraist n’ebikwa n’ime unu na ndi na - eso uzo ya niile, O gha ekpughere ebube ya n’ebe ndi n’eso uzo ya no, n’ihi na Chineke bu otu.
Ọrụ ebube ndị a bidoro n'ime anyị n'ihi na Mmụọ Nsọ biri n'ime ụka niile, nke naanị ntọala Kraịst. Ìhè ya na-enwu n’ime anyị? Gị na Chineke dị n’otu. I jikerezie ihu ahuhu maka ya, dika ndi ozi buru oke ahụhụ nke oma n'ihi aha Kraist?
Nna anyi nke bi n’eluigwe,
Ka edo aha gị nsọ.
Alaeze gi bia.
Ka uche gi mee n’ụwa dịka a na-eme ya n’eluigwe.
Nye anyị nri taa.
Gbaghara anyị ụgwọ anyị ji, dịka anyị gbaghaara ndị ji anyị ụgwọ.
Ewebà-kwa-la ayi n'ime ọnwunwa, kama dọputa ayi n'aka ajọ onye ahu.
N'ihi na Gi nwe ala-eze na ike na otuto rue mgbe nile. Amen.
Gini bu aha ohuru nke Chineke, nke Mmuo Nso na akuziri anyi? Gịnị ka ọ pụtara?
Page last modified on January 27, 2021, at 09:18 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)